गंगा जस्तै पवित्र हुन्छन् यी राशिका युवती,कहिलै सोच्दैनन् कसैको कुभलो |
गंगा जस्तै पवित्र हुन्छन् यी राशिका युवती,कहिलै सोच्दैनन् कसैको कुभलो
October 25, 2021 adminLeaveaComment on गंगा जस्तै पवित्र हुन्छन् यी राशिका युवती,कहिलै सोच्दैनन् कसैको कुभलो
हिन्दू धर्ममा सबै युवतीलाई माता लक्ष्मीको रुप मानिने गरिन्छ। देवीको रुपमा पूजा हुने महिलालाई कयौँ पटक आफ्नो पवित्रता देखाउनका लागि कडा तपस्या पनि गर्नुपरेको शास्त्रमा उल्लेख छ। आज हामी केही यस्ता राशिका युवतीको बारेमा जानकारी दिदैछौँ । उनीहरुलाई गंगा जस्तै पवित्र छन् भन्दा कुनै पटक पर्दैन। सुन्दरताको कुरा गर्नुपर्दा पनि यिनीहरु निकै आकर्षक देखिन्छन्। आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि?
मिथुन राशि: मिथुन राशिका युवती आफ्नो पार्टनर प्रति निकै इमान्दार हुने गर्दछन्। यिनीहरु एक पटक जोसँग प्रेम गर्छन त्यसलाई जीवनभर सच्चा मनले निभाउने गर्दछन्।यी राशिका युवतीले कहिलै पनि आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिदैनन्। यिनीहरुको मन पनि निकै सफा हुने गर्दछ। यस राशिका युवतीले कसैको पनि दुख देख्न सक्दैनन्।
मकर राशि: मकर राशिका युवती पनि मनका निकै सफा हुने गर्दछन्। यिनीहरु कसैसँग पनि आफ्नो मनको कुरा लुकाउँदैनन्। यी राशिका युवतीहरु पछाडिबाट पनि कसैलाई नराम्रो भन्दैनन्।यिनीहरु कसैको भावनामा ठेस नपुर्याएरै आफ्नो कुरा अरुका सामु प्रष्ट राख्न सक्षम हुन्छन्। यिनीहरु आफ्नो पति वा प्रेमीलाई खुसी राख्नका लागि हर प्रयास गर्ने गर्दछन्।
कुम्भ राशि: कुम्भ राशिका युवती निकै मेहनती हुनुका साथसाथै मनका पनि सफा हुन्छन्। कहिलै पनि कसैको नराम्रो सोच्दैनन्। सम्बन्ध निभाउने मामिलामा यिनीहरु दिमाग भन्दा धेरै मनबाटै सोच्ने गर्दछन्।यिनीहरु निकै रोमान्टिक पनि हुने गर्दछन्। त्यसैले पार्टनर पनि यिनीहरुसँग खुसी हुने गर्दछन्। यिनीहरुको प्रेम वास्तवमै सच्चा र पवित्र हुने गर्दछ।
यो पनि पढौ : गरीबी कसरी हटाउने ? :- भगवान् श्रीकृष्णले केही यस्ता वस्तुको वर्णन गर्नुभएको छ जसलाई घरमा राखेर सामान्य मनुष्यले दरिद्रता भगाउन सक्छ । सनातन धर्मका पौराणिक दस्तावेज र शास्त्रहरूमा मनुष्य जीवनका हरेक ठूलासाना समस्याका समाधान बताइएका छन् । महाभारतका अनुसार एकचोटि जेठा पाण्डव युधिष्ठिरले श्रीकृष्णलाई सोधेका थिए, ‘घरमा सधैं सुख समृद्धि रहोस् अनि धनधान्यको कमी नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ ?’
युधिष्ठिरको यस प्रश्नको जवाफमा श्रीकृष्णले केही वस्तुहरू घरमा भएमा दरिद्रता नआउने बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार प्रतिदिन घरमा गाईको घिउले बालेको दियो दान गर्दा अनि घिउबाट भोगप्रसाद चढाउँदा देवीदेवताको कृपा बर्सन्छ । यस्तो गर्दा घरहरूमा दरिद्रताको वास हुँदैन । घर आएका पाहुनालाई पानी पिउन दिँदा अशुभ ग्रह टर्छन् । त्यसैले कोही घरमा आउनेबित्तिकै पहिला पानी दिनुस् । महलाई पवित्र खाद्यान्न मानिएको छ । यसले घरबाट नकारात्मक ऊर्जा हटाउँछ । घरलाई जहिले पनि सफा राख्दा खर्चमा कमी आउँछ र धनधान्य बढ्छ ।
सौर्यमण्डलका ग्रहहरूले मनुष्यको जीवनलाई धेरै प्रभावित पार्छन् । प्रत्येक दिन व्यक्तिले ग्रहको हिसाब अनुसार निधारमा चन्दन लगाउँदा शुभ फल प्राप्त हुन्छ । चन्दन निधारमा लगाउँदा शीतलता प्राप्त हुन्छ र पापहरूको नाश पनि हुन्छ । घरमा चन्दन राख्दा त्यसको सुगन्धले नकारात्मक ऊर्जा पनि नष्ट हुन्छ । ज्ञान, बुद्धि र संगीतकी देवी सरस्वतीको हातमा वीणा अवश्य हुन्छ । पुराणहरूका अनुसार देवी सरस्वतीलाई कमलको फूलमा बसेको अनि हातमा वीणा समातेको देखिन्छ । कमल हिलोमा फुल्छ तर उसलाई हिलोले छुँदैन । उहाँको चित्र घरमा राख्दा पनि फल पाइन्छ ।
मोडल अन्जली अधिकारीलाई एक्कासि के भयो यस्तो?आफ्नो प्रेमीलाई हस्पिटल बाटै यस्तो संदेश(भिडियो)
अचानक कहाँबाट आइपुगे ११ जना अफगानिस्तानका नागरिक काठमाडौंमा?प्रहरीले गर्यो पक्राउ
सधै लक्ष्मीको बास चाहनु हुन्छ भने पर्समा कहीले नछुटाउनुहोस यी चिज राख्न।मिल्दो रहेछ नसोचेको धन प्राप्ती
आज हारेक द्वारमा देखिन्छिन लक्ष्मी माता,तत्र यस्ता १८ काम गर्नाले बाहिरी ढोकाबाटै बिदा हुन्छिन लक्ष्मी।भुलेर पनि नगर्नुहोस यो काम
यो पढ्न पाउन लागी जिउदो हुनुहुन्छ र एकदम भाग्यशाली ठान्नुहोस् आफुलाई।नपढे धेरै पछुतो हुनेछ,एक मिनट समय निकालेर पढ्नुहोला